25 Responses to “မြေလှန်ရှာကြရာဝယ်”
ရပြီး အများအကျိုးကိုမြင်လာနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်းသာ....
အင်း...နဲ့ ဟင်း ကြား က လေပူ တချက် တိုးလျ လျ လေး မှုတ် ထုတ်ရင်း...
ရတနာ ပုံ....၊ရ တနာ ပုံ....၊သုံးမကုန် ဖြုန်းမကုန်...ဥုံ...ဥုံ...ပုံ..
ဗဟုသုတအများကြီး ရရှိစေပါတယ်။ ကျေးဇူးးပါ။
စိမ်းလန်းနေတဲ့ သစ်ပင်တွေကလည်း ဘယ်နေရာမဆို တော်တော်လေးကို
ကိုယ် ရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ နေရာလေး ဆိုတော့ တကယ်ကို မြင်ယောင်မိတယ်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်ကတည်းက ရေစီးသန်ပါတယ် ဆိုတဲ့ ဥရုချောင်းလေးက သဗ္ဗန်လေးတွေပဲ ကျန်တော့တာ ၊
ကျန်တာတွေ ဝင်လို့ကို မရတော့တာ. . . ၊ လောဘကြောင့် အရာရာ ပျက်ဆီးသွားတာပါပဲ။
ဗဟုသုတ ပုံလေးတွေကိုတော့ ကျေးဇူးပါ။
အစ်မရေ...ဝမ်းစာဆိုပေမယ့် အတ္တတွေအများအပြားကပ်ပြီး အလွန်အမင်းလုပ်နေကြရင်တော့ ဟိုဘက်မှာ ဆိုးကြိုးတွေကလည်း စောင့်နေတတ်ပါတယ်။ ထင်တာပြောတာပါ :) ရောက်ဖူးတယ် မြစ်ကြီးနားကို ဘူတာကြီးနားမှာ တည်းခဲ့ဖူးတာပါ။ ဟိုးတော်တော်ဝေးတဲ့ လီဆူးရွာလည်းသွားခဲ့ဖူးတယ်။ တစ်ခုပဲညံ့သွားတယ် မြစ်ဆုံကိုတော့ရောက်ခဲ့ဘူးဗျ ဟီး ချိုကျ တို့ညံ့ချက်ပေါ့..ခင်မင်လေးစားစွာဖြင့်..
ကိုယ်ကျိုးတခုတည်းသာကြည့်ကြတဲ့ လောဘသားတွေ ရဲ့ မဆင်မခြင် မှုတွေကြောင့် အမိမြေကြီး ပျက်စီးနေရပုံတွေ ကို မချိတင်ကဲ ကြည့်သွားပါတယ် စိမ်းရေ ..
“ဥတု ရာသီ တောကိုမှီ၏ ” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ် ဟာ ဘယ်နေရာ ဘယ်ချောင် ရောက်နေပြီလည်း မသိ ။...
ဖျက်ဆီး တာက တည်ဆောက်တာ ထက် ဆူလွယ် နပ်လွယ် လွန်းလို့၊ ဘယ်သူမှ အပြု သဘော ကို မလုပ်ချင်ကြတော့ တာ လား ။
တတ်နိူင်သလောက်လေး ဖြစ်ဖြစ် ထိန်းသိမ်းကျရင် ကောင်းမယ်နော်..
ချောရေ.. သဘာပါတ်ဝန်းကျင်တွေ ပျက်သုန်းစေတဲ့ စီးပွားဆန်တဲ့လုပ်ကွက်တွေကြောင့်
တို့လူသားတွေ ဆိုးကျိုးကို လက်တွေ့ခံစားနေကြရပြီလေ..။
မပြောချင်လည်းပြောရအုံးမယ်ဗျို့ ပြောပြန်ရင်လည်းဘူတာကြီးပဲဆိုက်မယ့် မြို့ပတ်ရထားကြီးလိုပါပဲဗျာ
အကျိုးလိုလို့လုပ်တာ အကျိုးကဘယ်မှာလည်းတောမသိဖူး အကျိုးလိုလို့လုပ်ရင်းကရလာတဲ့ ဆိုးကျိုးတော့ လက်တွေ့ခံစားနေရပြီလေ အကျိုးတွေကတော့ ဘယ်မှာရောက်သွားပါလိမ့်နော်း)
ဒီက ပြန်လာမှ အဲ့ဒီမှာ ကျောက်လာတူးဦးမယ်......နေဦး.........း))
ပုံတွေကဗဟုသုတရစေပါတယ်၊ အရင်တူးတဲ့စနစ်နဲ့မတူ စက်တွေဟိုဘက်ကရောက်လာပါလား၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မင်းနှင့်ဘာဆိုင်လို့လဲ ဆိုပြီး၊ အင်းလေ သူတို့တိုင်းပြည်မှ မဟုတ်တာ ဒီအတိုင်းထားခဲ့မှာပေါ့။
တာပေါ့ဗျာ-သူတို့ တွေကသူ့ တိုင်းပြည်မှမဟုတ်တာကိုးဗျာ-သူတို့ တိုင်းပြည်ကောင်းစားဖို့ အတွက်
ဗဟုသုတအများကြီး ရရှိစေပါတယ်။ ကျေးဇူးးတင်ပါတယ်ဗျာ
ဟိုအရင်က ရှုခင်းတွေနဲ့ အများကြီး ကွာသွားပြီနော်။ဒါနဲ့ စကားမစပ် မရီးကထောင်းဘက်က တောင်ပေါ်က သီလရှင် ကျောင်းလေးကော ရှိသေးလားဟင်။ :)
ဖါးကန့်ကိုတောင် ကြည့်ပြီး လွမ်းသွားပြီ။
အင်း...ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး...မမ ဖြစ်စေချင်တဲ့ စိတ်ဆန္ဒမျိုး..သူတို့မှာသာ ရှိတတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ....
ဟုတ်တယ်နော်....ချော...ကျမတို့ဆီမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းက သိပ်မတွင်ကျယ်သေးဘူး....။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီပို့စ်လေးက ဗဟုသုတလည်းဖြစ်စေတယ်...။ တနေ့တခြား ဆိုးရွားလာတဲ့ ရာသီဥတုအတွက် ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်သင့်ကြောင်း သတိပေးတဲ့ ပို့စ်လဲဖြစ်တဲ့အတွက် စာဖတ်သူ အားလုံးကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်...။
အင်းဗျာ ... အဲလို အမြင်ကျယ်ကျယ် မြင်နိူင်ရင်တောင် ...
လူဆိုတာ လောဘ စိတ် နဲ့ မို့ ... ဆင်ခြင်ဥာဏ်ကိုေ၀၀ါးစေတဲ့
အချို့သော ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ နဲ့ နစ်သထက် နစ်ကုန်ကြတော့မလား ?
နောက်လူအလှည့်မရောက်အောင် မြန်မြန်တူးနေရတော့ ဂရုတစိုက် ထိန်းသိမ်းတာတွေ လုပ်ချိန်မရလို့နဲ့တူပါရဲ့။ သူဌေးတွေက အဲဒီမှာ နေမှာမှ မဟုတ်တော့ ရေကြီးလည်း သူတို့နဲ့ မဆိုင်ဘူးပဲ တွေးကြမှာပဲ။ ချမ်းသာတဲ့သူများ ပိုလောဘ တက်တယ်။
ပုံတွေ စုံစုံစေ့စေ့နဲ့ ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလို ကြည့်ခွင့်ရလိုက်တယ်။
သဘာဝ ပါတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းသင့်ပါပြီ။
အင်း စီးပွါးရှာတာလည်း ရှာတာပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့်လည်း ပါတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို ဂရုစိုက်ပြီး အလေးအနက်ထားလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။ အခုတောင် အိမ်တွေရေကြီးနေတယ်ဆိုတော့ နောင်ဆို ဘယ်လိုနေမလဲလို့ စဥ်းစားမိပါတယ်။
ဖားကန့်ဒေသ ရေကြီးမှုမှတ်တမ်း said...
[...] ရေးခဲ့ဖူးပါတယ်..( ဒီနေရာမှာ ပြန်ဖတ်လို့ရပါတယ်.. ) [...]
we repost your article on moemaka
we would like to use more of your environmental article of your home town.
thanks for let us share the article.